केशर पहाडीलाई ‘मुर्दावाद’ पत्र — OnlineDabali
(केशर पाहाडीलाई लेखिएको यो पत्र जनादेश साप्ताहिकले ३ पौष २०६९ प्रकाशित भएको थियो । अव त पाहाडी पनि अलप, ८० हजारसम्म छापिईने जनादेश पनि हरायो । जनादेशका एक संपादक कृष्ण सेन त मारिए,अरु संपादक, लेखक, स्तभ्भकार र इस्क्रा बनाउने टिम कता हरायो होला ! ती अहिले केकस्ता शब्द लेख्दा हुँन् ! कि कलम भाँचे कोनी ! अथवा ब्यहारवादी बने ? ६वर्ष पहिलाको पत्रले अहिले पनि रन्थानाउँदै छ)
केशर, तिमीले यो पत्रलाई सहजरुपमा लिन सक्दैनौं भन्ने बुझ्दा–बुझ्दै पनि लेखिरहेको छु । जीवनको अत्यन्तै ऊर्जामय कालखण्डमा तिमी–हामी सहयात्री थियौँ । फोनमै भनेको कुरा बिर्सिएका छैनौ होला । अहिले तिमी …..को कोलो खाँदै रमाईरहेका छौं । उत्तेजीत पार्ने मेरो प्रयासले काम गरेन । चकित भएँ तिम्रो यो सहनशीलतामा । ओ हो …. कस्तो दुःखको कुरा । कोलोमा रमाउने मेरो पूर्वसाथी । अहिले मलाई भने वैराग्य चलेको छ । आफैलाई छल्ने युक्तिबुद्धी खोज्दैजाँदा निन्दापथ अँगालेर त्यसै विषयमा विषयमा पिएचडी पनि गर्दै छु । यो पथले मलाई कहाँ पुर्याउला ! स्वयम् मलाई के गराउला ! अहिले नै भन्न त सक्दिन । थाहा छैन् । तर, आत्मसन्तुष्टि भने दिएको नै छ । आत्मसन्तुष्टिका लागि मान्छेले केके गर्दै न र ! अब मेरो कर्म र धर्म भनेकै तिम्रो उछित्तो खन्नु मात्रै हैन् तिम्रो विरुद्ध जेजस्तो गर्नु परेपनि मैले जोखिम उठाउनै पर्छ । अब म भने फर्कनै नसक्ने सोँच, मान्यता र भूमिकामा पुगि सकेँ … केशर । मान्छे आफै सन्तुष्टि हुँने अनेकौं उपाए खोज्छ, रोज्छ । लागिपर्छ पनि । विश्वासले नै त मान्छे सक्रिय हुन्छ, लतारिन्छ, घिसारिन्छ । म पनि अहिले आम नेपाली चलन अनुसार नै मनपर्दा नायक र मन नपर्दा राक्षस सोच्ने निन्दारसे संस्कृति मै रमेको छु । झुमेको लठ्एिकै छु । मदहोस् भएको छु । अर्काको उछित्तो खनेर आउने मजा भनेको भिन्नै स्वाद हुन्छ । के तिमीले त्यो पाएका छौं ? घृणाको ऊर्जा त भन्नै पर्दैन् बिजुलीपानी भन्दा नी कडा ।
यस पत्रलाई सुकर्म भन् या कुकर्म …जे भन….भन । मैले यो केही नयाँ–नौलो गरेको भने पटक्कै हैन् । ‘जनवादी’ संस्कृतिको निरन्तरता र पुर्खाको सुकर्म धानेको मात्र हुँ । अहिले पालो मात्र तिम्रो हो । अब तिमीले केही नाप्दैनौं । मेरो ठम्याईमा गोली नभएको बन्दुक र तिर कमानबाट छुटेको धनु न हौं तिमी । ठण्टी गाई न त ब्याउन सक्ने न त हाडमासु नै काम लाग्ने । म पनि अहिले गाली कुर्लेर निन्दारस ओकाल्दा हड्डी पनि मुस्कुराउने मान्छे भइसकेको छु । तिमीलाई उल्लयाउन, होच्याउन, चिढाउन मात्र नभई आफनै आत्मसन्तुष्टि बनाउन पनि यो बाटो रोजेको हुँ । यसैले मलाई दिनमा चैन दिन्छ । राती मस्त निन्द्रा लाग्छ । बाँकी लोक र पछुवाहरुले यसैलाई आर्दशवादी सोचाउन म सफल हौंला । नत्र मलाई पनि उल्याउने छन् । तँ को होस् ? भने प्रश्न तेर्सिने छ । हेर्नेहरुलाई औकात देखाउन पनि निन्दापथ अगाल्नु पर्छ । भलै परिणामलाई किन कुर्नु नपरोस् । नत्र अहिले जुन गाली तिमीलाई बक्छु त्यो मलाई पनि लाग्न सक्छ् । सुरक्षाको पहिलो उम्दा उपाय अचुक अश्त्र भनेकै पहिलो प्रहार हो । निन्दारसमै अब म पिएचडी गर्छु । आफ्नै नाम अगाडि डाक्टर लेख्छु । तर्क कोरल्छु । आर्दश खोक्छु । फलाक्छु । सुन्दर सपनाको आर्दश बोली सुगाभन्दा नी छिटो टिपेर मधुरवाणीमा भट्याउछु । मलाई राम्रै चिन्ने मभन्दा अर्को कोही छैन् । मेरा साँेच, सपना, प्रतिबद्धता सबै कुरा मेरो मलाई थाहा छ । मेरो आसक्ति, पारिवार मोह, विलास मोह, द्रब्यमोह, छाउराछाउरी मोह, आशक्ति र सयन कक्षका कुराहरु । छायाँभन्दा पनि ज्यादा, शासभन्दा नी नजिकिएर थाहा छ । म डराउने, छक्याउन नसक्ने र मबाट टाढा नरहने भनेकै त्यही म नै मात्र हुँ । त्यसैले निन्दारसमा चास्नी लगाएर छलिन्छु । अब यही बाटो ……मेरो मुल बाटो । आफैलाई सन्तुष्ट पारेर, चित्त बुझाएर सक्रिय बनाईरहँने चलन हो, निन्दारसेहरुको । मेरो मुलबाटो यही हो ….सपनाको लुटेरा र हत्यारा ….केशर ।
मेरा असफलता, तुहिएका सपना, भोगिएका पीडा, पूरा नभएका मनोकामना, गर्न नसकिएका आर्दशकर्म, गरिएका प्रतिबद्धताबाट पलायन हुँने यो मेरो छिर्के दाउ भन्न सकौला पनि … तर हैन् । यदी तिमी नभएको भए, म सपना देख्दैनथँे । जीवन शुखसयलमा बित्थ्यो । सुखी हुँने यो लोकमा धेरै उपाए छन् । त्यसैलाई अगाल्थे । बच्चा कोरल्थेँ, तोँद फूलाउथेँ । अन्य कुरा भड््खारामा परोस् । सोच्ने काम पटक्कै गर्दैनथेँ । अर्कै बाटो समात्थे । त्यही जीवनको मुलबाटो हुन्थ्यो । बन्थ्यो । ठूले कहलिन्थे । इतिहासको पोथ्रीमा आउँदो युगले मेरो किर्ती एस गाउँथ्यो । मेरो ठूले बन्ने र आर्दशवादी देखिने सपनामा पैरो गयो । ति सबैको मूलजड भनेकै तिमी नै हौ ।
तिमी मरिदिएको भए वा मारिएको भए अथवा ठहरै भएर आजै हरियो बाँसा बाँधेर टूँउ…उँ पार्दै घाट पुर्याउन पाएको भए मेरा समग्र चाहाना पूरा हुन्थे । भलै शंख म नै बजाउथे । जतिसुकै गाली गरे पनि मलामी गएर कुटनीतिक मर्यादा पूरा गर्दथे । तिम्रा परिवारलाई समवेदना दिन्थे । परलोकमा तिम्रो आत्माले शान्ति पाओस् भनेर बढेमाको विज्ञापन छपाउँथे । तिमी मर्नु र मारिनु पथ्र्यो । अवस्य पर्दथ्यो । तिम्रो ठाउँ अर्काले लिन्थ्यो । सबै झमेला र समस्याको उस्ले छुमन्तर गरिदिन्थ्यो । म बाँचेको थलो स्वर्ग नै हुन्थ्यो । तब ममा कुनै अभाव हुँदैनथ्यो । घ्यू–महको पोखरीमा पौडिन्थे । मधुवनमा चार्हाथे । हुर्र, परी र अप्सराहरुसँग रासलिलामा रगिंन्थे । म मात्रै हैन् मजस्तै सबैको भाग्य सप्रिन्थ्यो । तिमी बाँचेर र सकृय नै रै रहँदा ति सबै भड्खारामा परे । तुहिए । चार दशकदेखि नै मुर्ख बनाएर, लठ्याउदै विवेकलाई कैद गरेर, सोच्नै नसक्ने मुर्ख बनाएर पछुवा बनाएर डोर्‍याईरहेको अहिले पो पत्तो पाएँ । मलाई कलो खाने कुत्ता पो बनाएका रहेछौं । म पनि कत्रो हुस्सु…. । चेतै तिमीमै बन्धकी राख्ने । ओ …हो कत्रो दःखको कुरा ४५ वर्ष त मेरो सोचलाई बल्छी खेल्ने तिमीलाई कसरी माफ गर्न सकौला ? मेरो उदारता र मालिक बन्न दिने मेरो हुस्सुपना सम्झँदा एक्लै धुरुधुरु रुन्छु । अब मैले कसरी के भनेर लोकलाई चित्त बुझाउने । गाली फलाक्दै आफैलाई त चित्त बुझाउँला बाँकी तिन–तिन लोक, चौध भुवनका मनुवाहरु पनि त छन्– मलाई नियाल्ने, गिल्याउने र इतिहासलाई मिहीन पाराले पढने । आफैनै हुस्सुपना … भो अब म सम्झन्न त्यस्ता कुरा ।….त्यसैले म भन्छु….. हिजाका मेरा पृय कमरेड केशर पहाडी …आज मुर्दावाद, ‘मुर्दावाद’ ।
हाम्रा चारदशक लामा सहयात्राको मुल्यांकन गर्न सकौला भनेर मात्र लेखेको हुँ । हुँन त तिमी यो किन सम्झन्थ्यौ र ? भ्रम चुलियो । बाटो फेरियो । निन्दारसमा पिएचडी त्यसै गर्न थालेको हैन । हामीलाई यहाँसम्म ल्याएर बिजोग पार्ने तिमी मात्र एक्लो मान्छे हौं । तिमीले दरखास्त माग्यौं, म र हामीहरु विवेक बन्धकी राखेर तिम्रा पछाडि लुरुलुर कुत्ता झैं लाग्यौं । तिमीले कतिलाई लठ्याएर, कतिलाई मोहनी लगाएर, कतिलाई विज्ञापन खोलेर, कतिलाई कर्मको सोँचको क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर, कतिलाई तलबी पछुवा बनायौं । के गरेनौं तिमीले ! तिमी बाहेक हामी सबै हुस्सु रहेछौँ । अहिले बुझेको छु । त्यो सबै हिसाबकिताब राखेको छु । म र हामी हुस्सु बन्यौँ । हुस्सुपना बन्दैनौं भनेर सामुहिक मोक्षमहायज्ञमा अब लागेका छौँ । हाँसो र रुवाई, खुशी र अत्यन्तै कठिन क्षणहरुमा जीवन भोग्दा जेजस्ता मोडबाट हामी बढौँ त्यो तिमी–हामीलाईभन्दा अरुलाई थाहै छैन् । भावना र विचार कहिले कुन हावी भयो, कुनै बेला कुनै । तब पनि तिमी–हामीसँगै रहयौं । बिलनताको सिद्धान्त गढ्यौं । नायकको महानायक पनि सिद्धान्त बनाउँदा दस्तखत मेले नै पहलिो ठेसेँ । गीत गाएँ । कविता रची । ज्व… च्व… मेरो हुस्सुपना । लोक मलाई माफ देउ ! मेरो र हाम्रो हुस्सु पनामा । तिमी पृथक हौला भन्ने अनुमान मैले लगाउनु हुँदैन्थ्यो । मेरो हुस्सुपनाको म अब आम आत्मआलोचना गर्छु । चिहानमा पुरिएका र संस्लेषित गरिएका प्रसंग पनि नयाँ औचित्य सावित गर्न चिहान खँनिदो रहेछ इतिहासमा ।
‘मुर्दावाद’ भन्न पनि त तर्क चाहियो । तर्कलाई पुष्टि गर्ने तथ्यमा खेलिनु पर्यो‍ । अब म निन्दारसको घैला भर्न पिएचडी अनुसन्धानको विषय बनाउँदै छु – कसरी तिमी जन्मनु नै भूल र षड्यन्त्र थियो । तिम्रो जिन र कोख नै अपराधी हो । तिम्रो जन्मथलो नै नर्ककुण्ड । बाल्यपनामा नै कसरी तिमी विधर्मी भईसकेका थियौँ र गरेउ भनेर मेरो अनुसन्धान कृतिमा हेर्न पाउने छौं । तिमीले मदहोस् पारेका क्षण उल्लेख गर्ने छु । हुस्सु बनाएको क्षण त अझ मेरो चुरोकुरो हुँनेछ । यो थेसिस प्रकासन पूर्व नै तिमीलाई हरियो बाँसमा कसेर टुँ… पार्दै शंख फुक्न पाए, बुर्की छर्न पाए आफूलाई धन्य मान्थे । आफनो जीवन सफल भएको सोचेर मस्त निदाउन सक्थेँ । तर,…… केशर (एउटा खुसुक्कका कुरा सुटुक्कमा लोकले पत्तै नपाँउने गरेर बताइदेउन ….केशर,…. मैले र हामीहरुले यति उत्तेजित पार्दा पनि किन तिमी प्रतिकृया दिन्नौ हँ ? चुप रहन्छौं र व्यंग मुस्कुराएर घायल बनाउँछौं ! त्यसैले म र हामीहरु छक्क परेका छौँ । पराजित बन्दै असान्दर्भिक ठहरिँदा मेरो निन्दारस फिका भएको छ ।
त्यसैले फेरि औचित्य सावित गर्न केही उपद्रो गर्ने पर्ने भयो हामीले । नत्र पछुवालाई डोर्याउन हम्मेहम्मे पर्ने भयो । मेरो पिएचडी डिग्री पनि त्यसै धरापमा परेको छ । हाम्रो मोक्ष महायज्ञ पनि फिका पर्दो छ । हिजैको सम्बन्ध भनेर भएपनि सुटुक्क यो चाहीँ बताइदेउन । जुनदिन मैले फोनमा कलो खाएर घुक्ने भनेर सरापेको थिएँ, त्यही दिन तिमीलाई चुटेछन्, भकुरेछन् । संयोगले नै भएपनि राम्रै भएछ, ठिकै भएछ । दण्ड त दिएछन् नी ….कसैले । जो कसैले भएपनि । काम ठिकै गरे तर त्यसमा भने मेरो योजनानै भने हैन है । यो वाक्य भने भूलले छापिएको मात्र हो)
अन्तमा लोकको जानकारीको लागी मेरो मनको कुरा …….मुर्दावाद केशर पहाडी, मुर्दावाद मुर्दावाद